Megacubo: Luuqado badan oo waxtar leh iyo iskudhufnaan badan IPTV player | Laga soo bilaabo Linux
Megacube waa noo xigta codsi codsiyo badan in dib loo eego. Ka dib markii dhajinta ku saabsan Salool iyo Stremio, hadda waa markiisii ​​xiisaha iyo xiisaha lahaa Ciyaaryahan IPTV, taas oo ay fududahay in la arko On live Tv iyo fiidiyowyada internetka.
Megacube waa barnaamij heer sare ah oo lagu cuno waxyaabaha ku jira Tilmaamaha TV-yada, internetka iyo meel kasta oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Kanaallada raadiyaha. Iyo dhammaan, iyada oo loo marayo a saaxiibtinimo iyo fudud interface taasi badanaa waa wax soo jiidasho leh, mararka qaarna aad uga badan tan barnaamijyada kale ee la midka ah, ee isticmaalayaasha qaarkood.
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee arjiga, waxaa lagu tilmaamay sida soo socota:
"MegaCubo waa mashruuc il furan, oo si xor ah loo heli karo qof walba, iyada oo aan lahayn hababka lacag bixinta. Hadafkeedu waa inay u fidiso dadka isticmaala internetka khibrad fudud, dhakhso iyo wax ku ool ah oo ay ku daawan karaan telefishanka khadka tooska ah, iyagoo ka fogaanaya dhibaatooyinka la og yahay ee ay la kulmaan marka aan isku dayeyno inaan telefishanka ka daawanno biraawsarka.".
Sidoo kale, waxay la timaadaa fulin Windows (.exe) iyo Linux (.AppImage / .tar.gz), oo wuxuu la yimaadaa taageero luqadeed gudaha Isbaanish, Ingiriis, Boortaqiis iyo Talyaani. Sida laga daawan karo oo laga soo dejisan karo degelkooda GitHub.
Astaamaha ama waxqabadka shaqada ee ka dhigaya inay ka muuqato ama ka soo baxdo, waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Habka Miniplayer: Taasi waxay fududeyneysaa taranka «Miniplayer» ama Miniature Player mode wax soo saar la soo saaray, si ay u awoodaan inay marin u yeeshaan goob ama codsi kale inta ay weli daawanayaan, geeska shaashadda aan dooranay.
Waxqabadka xayeysiinta: Taasi waxay yareynaysaa oo fududeyneysaa soo bandhigida waxyaabaha xayeysiinta ah si ka aqbal badan isticmaalaha, iyadoo la isticmaalayo waxyaabo ay ka mid yihiin.
Maareynta fudud ee waxyaabaha la jecel yahay: Kaas oo kuu ogolaanaya in lagu daro kanaal furan qeybta barnaamijka ugu cadcad, si aad si toos ah hadhow ugu daawato. Ku dar, riix furayaasha "Ctrl + D" si aad uga saartid, mar kale taabo "Ctrl + D" furaha, haddii kanaalku furan yahay ama rarmayo.
Kuwa kale: Bulsho sii kordheysa oo isticmaaleyaal ah oo si isdaba joog ah u soo kordha kanaallo cusub, oo ka dhex muuqan kara kanaallada la caawiyay halkaasoo ay ku soo bandhigi karaan xogta dhagaystayaasha laga gaarey internetka ku dhowaad waqtiga dhabta ah. Kuwa kale, kuwo horumarsan.
Rakib Megacube waa wax aad u fudud, waxaad u baahan tahay inaad ordo terminal xididka la amar amar soo socda:
Xaaladda shaqsiyadeed, waxaan ka orday ka waddo / opt isticmaalaha caadiga ah leh mudnaanta maamulka (sudoers). Kadib fulinta amarka, oo haddii aysan khaladaad jirin, waxaa lagu fulin karaa marin toos ah menu-ka ugu weyn, qeybta warbaahinta.
Markii la bilaabay markii ugu horeysay, codsigu wuxuu ku weydiinayaa inaad rabto inaad isticmaasho hab gaar ah ama wadaag ah. Kiiskeena tijaabada ah, waxaan u xulanaa xulashada labaad, ka dibna xulashadeeda baar baar waxaan sii wadnay raadinta waxyaabaha ku jira internetka taasi waxay ku soo beegantay a qaabka raadinta. Marka xiriir la helo oo la xusho, kuwa badan oo la muujiyey, dalabku wuxuu isku dayaa inuu ku xirnaado nuxurka kanaalka la soo xulay si uu ugu muujiyo shaashadda, illaa iyo inta la heli karo xilligaas.
Marka la soo koobo, iyo shaqsiyan, waxay umuuqataa a beddel xiiso leh si loo isticmaalo haddii ay dhacdo sabab kasta ha noqotee lama isticmaali karo Kodi, Stremio, Waqtiga saloolka oo aad rabto wax ka badan intaad isticmaasho VLC ama barnaamij ah Torrents. Waxaan sidoo kale carabka ku adkeeyay in sida ku cad khibradeyda, waxay qaadataa waqti dheer in la furo, in kasta oo aan u maleynayo in laga yaabo, inay tahay sababta oo ah xawaaraha isku xirka internetka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Megacubo», waxtar leh oo dareen leh IPTV Player (Telefishanka Internetka), kaas oo bixiya xal fudud oo fudud oo si dhakhso leh oo toos ah loo daawado On live Tv iyo fiidiyowyada internetka; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Megacubo: Luqado badan oo waxtar leh iyo qaab dhismeedka iskuduwaha IPTV
Saaxiib weyn, wax yar ayey qaadataa in la isku xiro, isha waxaan ku isticmaalayaa ubuntu qorfe remix 20.04, marka si aad ah looma hubo waxa dhacaya hehe, mahadsanid wadaagga
Ku jawaab pablojet
Codsi aad u xiiso badan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii loogu talagalay sanduuqa taleefanka iyo sanduuqa Android
Jawaab FRANCISCO Alicea
Dhibaatooyin ayaan qabaa, ma i siinayo maqal waxaan haystaa lint mint 19.3
Salaan Sam! Waxaan baaray internetka mana arkin dukumiintiyo ku saabsan dhibaatada maqalka. Kuuma sheegi kari waayey waxa ay tahay, sifiican ayey iila muuqatay markii aan rakibey. Waxaan isticmaalaa Stremio, waa wax aad u fiican. Hadda waxaan u isticmaalaa iyada oo aan wax dhibaato ah.
Liis garee nooca cusub ee maareeyaha xirmooyinka GNU Guix 1.1
Stremio: Xarunta Multimedia-ka casriga ah oo beddel u ah Waqtiga saan-saanta